Renin'Andriamanitra - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Renin’Andriamanitra)
Ny anaram-boninahitra hoe Renin'Andriamanitra dia anarana omen'ny Katolika sy ny Ortodoksa an'i Maria renin'i Jesoa. Izany anarana izany dia notapahin'ny konsily tao Efeso (na Efesosy na Efezy) tamin'ny taona 431 nefa i Aleksandra avy any Aleksandria no nampiasa azy voalohany tamin'ny taona 325. Amin'ny fiteny grika dia ny hoe Θεοτόκος / Theotokos ("niteraka an'Andriamanitra") no dikan'io teny io.
Noho i Maria niteraka an'i Jesoa (na Jesosy) izay inoan'izy ireo fa sady olona no Andriamanitra no mahatonga izany. Raha sady olona tokoa no Andriamanitra tokoa i Jesoa dia sady niteraka olona tokoa no niteraka Andriamanitra tokoa i Maria niteraka azy, hoy ny Katolika.
Tsy manaiky ny anaovana an'i Maria ho Renin'Andriamanitra ny Fiangonana protestanta. Ekeny ny maha renin'ilay olona atao hoe Jesosy an'i Maria fa toheriny ny maha renin'ilay Andriamanitra, izay tsy iza fa i Jesosy ihany, an' Maria.
Ny antokom-pivavahana tsy mino ny Trinite dia mitovy hevitra amin'ny Protestanta nefa ny azy indray dia mazava kokoa satria tsipahiny tanteraka ny fampianarana manao an'i Jesosy na Jesoa ho Andriamanitra. Isan'ireo fivavahana ireo ny Vavolombelon'i Jehovah.
Fampiakarana an'i Maria
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Renin%27Andriamanitra&oldid=971356"
Voaova farany tamin'ny 13 Jiona 2019 amin'ny 16:56 ity pejy ity.